China uwe mmepụta na rụpụta | Yiwu Shunshui
Ọrụ anaghị akwụsị naanị n'ihi na ọnọdụ okpomọkụ na-ada, mana enweghị ezigbo aka aka, ọ ga-abụ ihe na-egbu mgbu nke ukwuu iji mezue ọrụ ahụ n'oge oyi. Ekele maka mkpuchi ihe, ihe mkpuchi mmiri na ike mgbanwe dị ukwuu na uwe ọrụ kachasị mma n'oge oyi, ngwá ọrụ oyi na mkpịsị aka siri ike agaghị abụ nsogbu. Ya mere, biko debe mkpịsị aka gị aka ma yi uwe aka ndị a iji mee ihe ndị a:
Mkpịsị aka ọrụ oge oyi dị iche na gloves ị na-ejikarị eme ka gburugburu ebe obibi dị mma na ọrụ ihu igwe ndị ọzọ na-ekpo ọkụ. Ha aghaghi imezu ihe ndi ozo choro iji gbochie nkasi obi na mmerụ ahụ. Mgbe ịzụrụ uwe kachasị mma na-arụ ọrụ n'oge oyi, ọ dị mkpa ka a tụlee ihe ndị a dị mkpa.
Ọrụ oyi na-apụtakarị ndozi mmezi mberede ma ọ bụ mwepụ snow, mana ọ nwekwara ike ịgụnye ọrụ dị iche iche ị na-enweghị oge maka ọnwa dị ala. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịrụzigharị igwe ihe, ọrụ aka gị ga-agbanwe ka aka gị wee nwee ike ịghọta obere ngwaike ahụ. Ha aghaghi ibu uzo di nkpa ka ha daba ebe di nkpa, dika ihe nchikota ugbo ala. Maka iwepụ snow na ọrụ ndị ọzọ nwere ihe ọchọrọ dị ala, ọrụ aka ga-adị ike ma sie ike mmiri iji mee ka aka kpoo ma kpoo ọkụ. Ọrụ dị mkpa bụ igbochi snow ịbanye na nkwonkwo aka.
Ihe eji arụ ọrụ aka na ọrụ aka ọdịnala na-adịkarị iche. Ihe eji eme ihe (dika nylon, spandex, na polyester) bu ihe ndi ozo. Ihe ndị a bụ ihe siri ike, nke na-enweghị mmiri, nke dị larịị na nke dị mkpa iji nye mgbanwe ma dị mma maka itinye ya na ebe dị warara. N'ime oru ndi ozo, gloves ndi kariri nke ejiri akpụkpọ a gwara agwa na-agbasa oku di n'ime, ebe a na-egbochi azu na mmiri. Ọbụna ha nwere ike jupụta na ajị anụ iji chekwaa okpomọkụ kachasị elu. Ha dị okpotokpo karịa ogwe aka iji na-arụ ọrụ ma dị mma maka ọrụ ụlọ na obere ọkụ.
Comfortchọrọ nkasi obi kachasị mma na arụmọrụ. Gbalị ịmecha ọrụ na gloves ndị buru oke ibu na-abụkarị ihe efu. Ọzọkwa, ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe mkpuchi ihe na-ekpo ọkụ na-ekpuchi ahụ ọkụ mmadụ site na akpa ikuku, gloves ndị pere mpe nwere ike ịpịa akpa ikuku ahụ, si otú a na-ebelata njide okpomọkụ.
Ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na-enye eserese nha iji nyere gị aka ịhọrọ uwe kacha mma n'oge oyi maka aka gị. Nke a na-enye aka n'ihi na nha nwere ike ịdị iche site na onye nrụpụta na onye nrụpụta. Nwere ike ịnwe ọnọdụ n'otu ụdị na etiti ọnọdụ na akara ọzọ. Can nwere ike iji tebụl dị iche iche tụọ aka gị ma kpebie na obere, ọkara ma ọ bụ buru ibu kachasị mma maka otu akara.
Uwe aka nke nwere naanị otu ihe iji chebe aka gị na oyi ma ọ bụ ikuku, snow ma ọ bụ mmiri ozuzo. Ọrụ kacha mma na-arụ ọrụ n'oge oyi kwesịrị inwe ọtụtụ akwa, nke nwere ike ịrụkọ ọrụ ọnụ iji kpoo ọkụ.
Mkpụrụ elu dị na akpụkpọ anụ ma ọ bụ ihe arụ nwere ike ichebe aka na ọkọ na mmerụ ahụ, ma gbochie ikuku na mmiri ịbanye. N'ime, akwa ajị anụ, ajị anụ ma ọ bụ mkpuchi polyester na-enyere aka mee ka ahụ dị ọkụ ma mee ka ọ dị ọkụ. Ruo ugbu a, ajị anụ bụ otu n'ime ihe kachasị mma mkpuchi ihe. Ọbụna na mmiri mmiri, ajị anụ nwere ike ijigide okpomọkụ, nke pụtara na ọsụsọ agaghị emetụta nkasi obi gị. Uwe ajị anụ dị mma, arụmọrụ ya yiri ajị anụ, mana arụmọrụ dị ala. Polyester bụ ihe kachasị dị irè na nhọrọ atọ ahụ.
Ọ bụrụ na aka gị ejiri ọsụsọ si na mkpịsị aka aka gị, aka uwe ahụ nwere ike tufuo uru mkpuchi ya niile. Uwe aka nwere ntakịrị ume iku ume na-egbochi aka ịmalite ikpo oke ọkụ, na-eme ka ikuku dị ọkụ gbapụ ma na-enwe ọnọdụ dị mma. Ngwurugwu nkịtị dị ka ajị anụ na-eku ume karịa eriri sịntetik. Akpụkpọ anụ ma ọ bụ rawhide ọrụ gloves na naịlọn na azụ na-enye ụfọdụ ogo ume ma na-ekpugheghị aka gị niile na ihe dị iche iche.
Uwe na-arụ ọrụ n'oge oyi ga-abụ mmiri na-adịghị. Ewezuga ịmị aka gị na oyi na-atụ oyi, ọ dịghị ụzọ ọzọ a ga-esi emebi anụ ahụ gị, mkpịsị aka gị, akwara ngwụcha gị na mgbanwe gị. Uwe a na-etinye rubberized nwere ike igbochi mmiri ịbanye, yabụ ọ bụ ezie na ha anaghị eku ume, ha bụ nhọrọ magburu onwe ya mgbe ị na-arụ ọrụ na mmiri ozuzo na snow. Enwere ike iji ihe ndị e ji silicone sprays na ihe ndị mejupụtara mepụta akwa mmiri na-enweghị mmiri (dịka akpụkpọ anụ na akpụkpọ anụ), mee ka ọ ghara ịbanye.